DAAWO: Axmed Madoobe oo digniintii ugu adkeyd ka soo saaray Kismaayo, kuna dhawaaqay. – Puntlandtimes
DAAWO: Axmed Madoobe oo digniintii ugu adkeyd ka soo saaray Kismaayo, kuna dhawaaqay.
KISMAAYO(P-TIMES) – Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) ayaa digniin adag ka soo saartay xaaladda faragalinta maamulkiisa uga imaanaysa dawladda Faderaalka ee Soomaaliya, isagoo sheegay in ay ka shaqeynayso sidii ay Dagaalo Sokeeye dib uga qarxi lahaayeen magaalada Kismaayo.
Madaxweynaha oo shalay dib uga laabtay Garoowe, shirna ku qabtay magaalada Kismaayo ayaa sheegay in ficilada ay wado Xukuumada Faderaalka ay yihiin kuwa la doonayo in dhibaato lagu gaarsiyo Shacabka Jubbaland.
Axmed Madoobe ayaa cadeeyey in ay jiraan shaqsiyaad la dajiyey Hotelo iyo guryo ku yaala Muqdisho, loona diyaarinayo in ay xabado ka dhex-ridan magaalada Kismaayo, si dawladda Faderaalka ay danaheeda uga fushato guracan.